တစ်သံသရာလုံး ထွက်ပေါက်မရှိတော့မယ့် လောကငရဲ ၀ဋ်ဆင်းရဲကို လှည့်တောင်မကြည့်သင့်ပါ
၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ မေလ တစ်ရက်ရက်မှာ ကျင်းပမယ်ဆိုတဲ့ အခြေခံဥပဒေမူကြမ်း အတည်ပြုရေး ဆန္ဒခံယူပွဲဆိုတာကို နအဖက မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ လုပ်တာလဲ။ နအဖဟာ အခုအချိန်မှာ သူလို အပ် နေတာ သူ့ကို တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုရေးပါ။ သူ့ရင်ဝမှာ စူးနေတဲ့၊ သူ့ဇာတ်သူ မနိုင်ခဲ့တဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ ဒီမိုကရေစီကို လိုလားတဲ့ တောင့်တတဲ့ ဆန္ဒအမှန်တွေကို ဖော်ထုတ်ပြသနိုင်ခဲ့တဲ့ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် ချေဖျက်ပစ်ချင်နေပါတယ်။ အခု ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ မေလတွင် ကျင်းပမယ်ဆိုတဲ့ ဥပ ဒေမူကြမ်း ဆန္ဒခံယူပွဲဆိုတာဟာလည်း သူဆင်ထားတဲ့အကွက်ပါပဲ။ နိုင်လည်းနိုင်၊ ရှုံးလည်းနိုင်ဆိုတဲ့အကွက်ကို ဘယ်လိုဆင်ထားတာလဲဆိုတော့ ပြည်သူတွေရဲ့ မဲရုံကိုသွားတဲ့ ခြေလှမ်းတိုင်းဟာ ကိုယ်တိုင်မဲပေးခဲ့ကြတဲ့ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်၊ ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ ဒီမိုကရေစီမျှော်မှန်းချက်တွေကို ကိုယ်တိုင် ပြန်ဖျက်သလို ဖြစ်သွားအောင် အကွက်ဆင်ထားတာပါပဲ။ ဒါကို ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ တော်လှန်ရေး သတိရှိကြဖို့ လိုပါပြီ။
သေချာတာကတော့ နအဖဟာ ဒီပွဲကို နိုင်အောင်ကို လုပ်မှာပါ။ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ ကမ်းလှမ်းမှုမှန်သမျှကို ပယ်ချ လိုက်ပြီ ဆိုကတည်းကိုက သူတို့ဟာ ဒီပွဲကို မနိုင်နိုင်အောင် လုပ်ကြတော့မှာပါ။ နောက်တစ်ချက်အနေဖြင့် ဒီဆန္ဒခံယူပွဲမှာ အတည်ပြုမယ်ဆိုတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ဆိုတာ မည်သို့သော ဥပဒေမှန်းလည်းမသိဘဲ၊ မဲရာခိုင်နှုန်းမည်မျှရမှ အနိုင်ရမည်ဟု မည်သည့်အရာကိုမျှ တိတိကျကျ ဖော်ပြထားခြင်း မရှိသော ထောက် ခံသင့်သည်၊ ကန့်ကွက်သင့်သည်ကို ဝေဖန်ပိုင်းခြား ဆုံးဖြတ်နိုင်ခွင့် ပေးထားခြင်းမရှိဘဲ မဲရုံကိုသွား၊ ထည့် ချင်တဲ့မဲ ထည့်ခဲ့ဆိုတာဟာ ပြည်သူလူထုကို လူဆိုသည့် အဓိပ္ပာယ်မှ သွေဖည်အောင် တနည်းအားဖြင့် ယုတ်မာ စွာ ကြံစည်ထားခြင်းသာဖြစ်သည်။
သူတို့ရဲ့ ဆန္ဒခံယူပွဲကို အတည်မဖြစ်ဖြစ်အောင် လုပ်မှာ ၁၀၀% ကျိန်းသေပါသည်။ ပြည်သူလူထု၏ နအဖကို စစ်အာဏာရှင်ကို ဆန့်ကျင်ခြင်းသည် ရင်ထဲတွင် ကိန်းအောင်းနေတဲ့ အမှန်တရားတစ်ခုပါ။ ဒီအမှန်တရားကို ဖော်ထုတ်ပြသတဲ့ နေရာမှာတော့ ကျနော်တို့ရဲ့ အန္တိမရည်မှန်းချက်ကို မထိခိုက်အောင် ရွေးချယ်တတ်ဖို့ လိုအပ် ကြောင်း အနူးအညွတ် ပန်ကြားအပ်ပါတယ်။
အောက်ဖော်ပြပါ ဆောင်းပါးကို ပြန်လည်ကိုးကားဖော်ပြရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ နအဖ၏ သရုပ်သကန် ဘီလူးရုပ်အမှန်ကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မြင်တတ်ကြစေရန် ရည်ရွယ်ရင်းဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ ဒီမိုက ရေစီအင်အားစုများ၊ ပြည်သူများအနေဖြင့် ခိုင်မာတဲ့၊ ပြတ်သားတဲ့ ရပ်တည်ချက်တွေနဲ့ စစ်အာဏာရှင်ကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ဆန့်ကျင်ကြဖို့၊ တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ အားစိုက်ထုတ်ဖို့ အချိန်ရောက်နေပါပြီ။
အမျိုးသားညီလာခံကျင်းပရေးကော်မရှင်အစည်းအဝေး (၂/၂၀၀၇) ကို ဇွန်လ (၅) ရက်နေ့မှာ ကျင်းပတယ်။
ကျင်းပရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းစိန်က ….
“၂၀၀၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ (၁၈) ရက်နေ့မှာ ညီလာခံကို ပြည်လည်ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း”
“ဒါဟာ နောက်ဆုံးအကြိမ်ကျင်းပမယ့် ညီလာခံလည်းဖြစ်ကြောင်း”
“ဒီညီလာခံမှာ တချို့အချက်အလက်များကို ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဖြည့်စွက်ခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်းများ ပြုလုပ်သွားကြရမှာ ဖြစ်ကြောင်း”
MRTV မှာ ဆုန်သင်းပါရ်ရဲ့ အမျိုးသားညီလာခံဖွဲ့သီချင်းနှင့် ရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့် မြင်လိုက်ကြားလိုက် ရတယ်။
နအဖနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးဥာဏ်ဝင်းက အာဆီယံဆမ်းမစ်မှာ ၂၀၀၈ ဆန်းရင် လူထုဆန္ဒခံယူပွဲ လုပ်နိုင်မယ်လို့ ပြောဆိုပြီးကတည်းက ….
တစည အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးခင်မောင်ကြီးက နောက်ရွေးကောက်ပွဲအတွက် အဆင်သင့်ပြင်နေပြီလို့ အင်တာဗျူးပြီးကတည်းက …
ညီလာခံ ပြန်စတော့မယ်ဆိုတာ လူတိုင်းခန့်မှန်းနိုင်ကြပြီးသားပဲ။
တခါပြန်ရပ်သွားလိုက်။ နောက်တခါ ပြန်စလာလိုက်။ ဂျာအေးကို သူ့အမေ အကြိမ်ကြိမ် ရိုက်နေတဲ့အဖြစ်။
ဒါလည်း ရိုးအီနေတဲ့၊ ကလေးတွေတောင် အလွတ်ရနေနိုင်တဲ့ ဖြစ်စဉ်ပဲလေ။
ဘာဆန်းလို့လဲ ကျနော့်အထင်တော့ ဘာမှမဆန်းဘူး။
ဒါပေမယ့် ဆန်းနေတယ်၊ ဆန်းနေကြတယ်။
လူတချို့အတွက်ကျ အံ့အားသင့်လောက်အောင် ဆန်းနေကြတယ်။
သူတို့ဘာကြောင့် ဆန်းနေကြတာပါလိမ့်၊ ကျနော်အကဲခတ်ကြည့်မိတော့…
(၂) ခု သွားမြင်တယ်။
တခုက… ဒါဟာ “နောက်ဆုံးအကြိမ်ကျင်းပပြုလုပ်မယ့်ညီလာခံ” ဆိုတဲ့ နာမ၀ိသေသန။
ဒီမှာအဆုံးသတ်တော့မယ်၊ အဆုံးမသတ်ခင် နောက်ဆုံးအနေနှင့် ကိုယ် ဘာ ထလုပ်ရင် ရနိုင်ဦး
ကိုယ်ဘာလုပ်ခွင့်ရမလဲ။ ကြံစမ်း။ ကြံစမ်း။ ကိုယ်စွမ်း ဥာဏ်စွမ်းရှိသမျှ ကြံကြည့်စမ်း။
နောက်တခုက “ဒီညီလာခံမှာ အချို့အချက်အလက်များကို ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဖြည့်စွက်ခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်းများ ပြုလုပ်သွားကြရမှာဖြစ်ကြောင်း” ဆိုပြီး ဗိုလ်သိန်းစိန် ကြာပစ်လိုက်တဲ့ကိစ္စ
Heart ထိသွားတာ ဖြစ်နိုင်တယ်။
ဒီ မဆိုသလောက် မက်လုံးလေးအပေါ်မှာ စိတ်ကစားကြတာ။
“အချို့အချက်အလက်များ” ဆိုတာကို အရုပ်ရေးကြည့်ကြတာဖြစ်မယ်။
“ပြင်ဆင်ခွင့်၊ ဖြည့်စွက်ခွင့်၊ ပယ်ဖျက်ခွင့်” တွေနှင့်ပတ်သက်ပြီး အားတက်မျှော်လင့်ကြည့်ကြတာ ဖြစ်မယ်။
အဲဒီလိုကြေးဆိုရင်တော့ သူတို့အဖို့ ဆန်းပြီပေါ့။
ကိုယ့်တွက်ရေးနှင့်ကိုယ် စက်သူဌေး လုပ်ကြည့်ကြသူများ၊ ဒါလည်းရှိမှာပဲလေ၊ ကွဲလွဲခွင့်ရှိပါတယ်၊ လူအမျိုးမျိုး ဘုရားရှိခိုးအမျိုးမျိုးလို့ ဆိုပေတာကိုး။
နအဖရဲ့ အမျိုးသားညီလာခံဆိုတာက ဘယ်လိုအမျိုးအစားလဲ။
နအဖရဲ့ ကတိက၀တ်တွေနှင့် ဆောင်ရွက်ပြုမူခဲ့၊ ပြုမူဆဲ အလုပ်တွေက ဘယ်လိုအမျိုးအစားတွေလဲ။
ကျနော်တော့ အဲဒီလို တချက်ချင်းကြည့်ကြည့်ချင်တယ်။
ဒီမေးခွန်းတွေအတွက် အဖြေတွေကို ဒုက္ခတွေ ခါးစည်းခံနေရတဲ့ မြန်မာပြည်သူအားလုံးကတော့
လူထုလက်ထဲ အာဏာရလုရခင်ကာလမှာ အဲဒီလူထုကို ရက်ရက်စက်စက်သတ်ဖြတ်ချေမှုန်းပြီး အဲဒီအာဏာကို အတင်းလုယူခဲ့တဲ့အစိုးရ။ အာဏာသိမ်းအစိုးရ။
စစ်အုပ်စုအကျိုးစီးပွားအတွက် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို တဆံချည်မလျှော့စတမ်း တည်ဆောက်
သွားဖို့ သံဓိဋ္ဌာန် ခိုင်ခိုင်ချထားတဲ့ အစိုးရ။
စစ်အာဏာတည်မြဲဖို့ဆိုရင် ဘာကိုမဆို ပြောရဲ၊ ဘာကိုမဆို လိမ်ရဲ၊ ဘာကိုမဆို လုပ်ရဲတဲ့ အစိုးရ။
ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရပါတီတွေ လုံးလုံးမတက်တဲ့။ လူထုလူတန်းစား ကိုယ်စားလှယ်အစစ်အမှန်တွေ လုံးလုံးတက်ခွင့်မရတဲ့။ လက်ညှိုးထောင် ခေါင်းညိတ်တွေကိုသာ လက်ရွေးစင်ခေါင်းခေါက် လက်ကုပ်ပြီး တက်ခိုင်းထားတဲ့။ အပစ်အခတ်ရပ်စဲထားတဲ့ တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကို “အထူးဖိတ်ကြားသူများ” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နှင့် နိုင်ငံရေးအရ တန်ဖိုးလျှော့ချပြီး တက်ရောက်စေတဲ့။ တက်ရောက်ရသည့်တိုင်အောင် တင်ပြချက်တွေကို “မှတ်တမ်းတင်ပါသည်” ဆိုတဲ့အဆင့်မှာပဲ ချောင်ထိုးခံထားရတဲ့၊ ပြည်သူတွေ၊ ပြည်တွင်း ပြည်ပ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေ၊ တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ နိုင်ငံတကာမိသားစုတွေက လုံးဝလုံးဝမှ အယုံအကြည်မရှိကြတဲ့ ညီလာခံ။
ထို ထိုသော ဂုဏ်ပုဒ်များနှင့် ပြီးပြည့်စုံတဲ့ အတုအယောင် အမျိုးသားညီလာခံ။
နအဖရဲ့ ကတိက၀တ်တွေနှင့် ဆောင်ရွက်ပြုမူခဲ့။ ပြုမူဆဲအလုပ်တွေဆိုတာလဲ...
“ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရပါတီကို အာဏာအပ်ပြီး ကျနော်တို့ တပ်မတော်က စစ်တန်းလျားကို ပြန်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်” ဆိုတာက အစ …
တတိုင်းပြည်လုံး (စစ်အုပ်စုနဲ့ အပေါင်းပါ အစုလေးတစုကလွဲလို့) ကုန်းကောက်စရာမရှိလောက်အောင် ချွတ်ခြုံကျနေတဲ့အခိုက်မှာ …
“တိုင်းပြည်ဟာ ဘက်ပေါင်းစုံ အရှိန်အဟုန်နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေပါတယ်” လို့ မျက်နှာပြောင်တိုက်ရဲတာအဆုံး
ကျနော်တို့အတွက် ယုံကြည်အားကိုးလောက်စရာ ဘယ်မှာရှိလို့လဲ။
ကျနော်တော့ ဒီ နအဖရဲ့စကားကို…
ကျနော်တို့ ပြည်သူတွေရဲ့ အကျိုးရှိရာရှိကြောင်းစံနှင့် တိုင်းကြည့်မိတိုင်း ဘယ်တုန်းကမှ ဘယ်လောက်ကလေးမှ ရှာမတွေ့ဖူးဘူး။
ယုံကြည်လောက်တဲ့အနေအထား ကျနော့်သိမြင်မှုထဲမှာ တခုတလေမှ လုံးလုံးရှာလို့မရခဲ့ဖူးဘူး။
ကိုအေးလွင်တို့အုပ်စု ကားလေးတစီးငှားပြီး ရွာရိုးကိုးပေါက်လျှောက်သွား။
သူများယုံယုံ မယုံယုံ “NC ကို ထောက်ခံကြပါ။ Sanction ကို ကန့်ကွက်ကြပါ။” လို့ လိုက်ပြောနေ ကြတာ ကျနော်မအံ့သြဘူး။
အရိုးအရင်းလောက်နဲ့ မြိန်ရေရှက်ရေဖြစ်ပြီး သခင်အားရ ကျွန်ပါးဝလုပ်ပြနေကြတာ မဟုတ်လား။
ဒီအသီးစားမိပြီး ဒီသီချင်းကို ညည်းပြနေကြရတာ မဟုတ်ဘူးလား။
ခေတ်အဆက်ဆက်မှာ ဒီလိုဖော်လံဖားတွေ။ ကြောက်ဖားတွေနှင့် အလိုတော်ရိတွေဆိုတာ
ကျနော် အဲဒါ မအံ့သြဘူး။
“NC က သိပ်ကိုကောင်းပါတယ် သိပ်ကိုတက်သင့်ပါတယ်။ ကျနော်တောင် တက်ခွင့်မရလို့ တက်ချင်လိုက်တာ တပိုင်းသေနေပြီ” လို့ပဲ ပြောပြော။
“NC မတက်ရင် ငါတကောကောတာပဲ။ တိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးတာပဲ။ ပြည်သူတွေကို မွဲအောင် ငတ်အောင်လုပ်တာပဲ” လို့ပဲ ဆို ဆို …
အဲဒီလိုပြောရင် စားပေါက်ချောင်တယ်ထင်လို့ သူ့ကျေးဇူးရှင်တွေ ကြည်အောင်၊ သာအောင် ပြောရရှာတာ။
ဒါက … ကျနော့်အနေနှင့် သဘောမတူပေမယ့် သဘောပေါက်လို့ရတယ်။
ဦးလှမြင့်တို့ ဦးထွန်းအောင်ကျော်တို့က သူတို့ဘာသာဘာဝစကားကို သူတို့ဘာသာ ပြောနေ ဆိုနေကြတာ
ဘာမှလည်း မဖြစ်ဘူး။ ဘာမှလည်း ဖြစ်မလာဘူး။
ဘယ်လိုခုန်ခုန် ဘယ်လိုဖုန်မှလည်း မထဘူး။ စိတ်သာချ။
ဒါက ရှင်းတယ်။ ခွေးအလုပ် ခွေးလုပ်၊ မြင်းအလုပ် မြင်းလုပ်ဆိုတဲ့ မြန်မာစကားက ရှိပြီးသားပဲ။ သူတို့ကတော့ ထားလိုက်တော့။
ပြီးတော့ ညီလာခံကော်မရှင်က ပြဋ္ဌာန်းပေးထားတဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေကိစ္စ။ အဲဒါနှင့်
ပတ်သက်ပြီး ကျနော် ကြည့်ကြည့်တယ်။ အမျိုးသားညီလာခံကျင်းပရေးဆိုင်ရာ လုပ်ထုံး
လုပ်နည်းများရဲ့ အခန်း (၄) ပိုဒ်ခွဲ (၄၃) မှာ ဒီလို ဆိုထားပါတယ်။
“ဆွေးနွေးမည့် ညီလာခံကိုယ်စားလှယ်များသည် ဦးတည်ချက် (၆) ချက် ဘောင်အတွင်းမှ မိမိတို့ တင်ပြလိုသော ဆန္ဒသဘောထားများနှင့် အကြံပြုချက်များကို ဆွေးနွေးတင်ပြခွင့်ရှိသည်။ သို့သော် ယင်းသို့ဆွေးနွေးရာတွင် ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများတွင် ဖော်ပြထားသော တားမြစ်ချက်များကို ချိုးဖောက်ခြင်းမပြုရ။”
ကျနော်တို့ကို နအဖရဲ့ဦးတည်ချက် (၆) ရပ်က ခြေရော လက်ရောချုပ်ထားပြီးသားပါ။
သူ ခွင့်ပြုထားတဲ့ မူထဲ ဘောင်ထဲကပဲပြော။ နည်းနည်းလေးမှ စည်းကျော်မလာနဲ့ဆိုတာက ရှိပြီးသားပါ။ ပြီးတော့ အခန်း (၄) ပိုဒ်ခွဲ (၄၅ - စ) မှာလည်း …
“ညီလာခံ၌ ဆွေးနွေးပြီးပြတ်ပြီးဖြစ်သော ကိစ္စတရပ်ရပ်ကို ထပ်မံတင်ပြခြင်းမပြုရ” တဲ့။
အခုလို ထပ်ပြီး ကန့်ထားပြန်တယ်။ ထွက်ပြီးသားဆင်စွယ် ၀င်တယ်လို့မရှိစေရဆိုတဲ့သဘော။ အပြတ်တွေပါ။
အဲဒီလို အကန့်အသတ် အဖုံးအဖိတွေနှင့် ညီလာခံဟာ ဒီမိုကရေစီလုပ်ဟန် လုံးလုံးချို့တဲ့နေလို့ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ဆက်မတက်တော့တာ။ လေ့လာသူအဆင့်သာ လွှတ်တော့တာ အားလုံး တွေ့ကြမှာပါ။
အားလုံးလည်းမှတ်မိကြမယ် ထင်ပါတယ်။ အပစ်အခတ်ရပ်စဲထားတဲ့ တော်လှန်ရေး အင်အားစု တွေထဲက နိုင်ငံရေးကြီးသူများဟာ သူတို့လုပ်စရာရှိတာတွေကို တောက်လျှောက်လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
အပစ်ရပ် (၆) ဖွဲ့ စုဖွဲ့ပြီးတင်တယ်။ (၇) ဖွဲ့ စုဖွဲ့ပြီး တင်တယ်။ (၁၃) ဖွဲ့စုဖွဲ့ပြီး တင်တယ်။
အမျိုးသားညီလာခံရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ပြည့်စုံဖို့အတွက် အင်အားစုအားလုံး ပါဝင်သင့်တယ်။ အထူးသဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရပါတီတွေ ပါဝင်သင့်တယ်။ အပစ်အခတ် မရပ်စဲသေးသူများကိုပင်လျှင် ဖိတ်ကြားသင့်တယ်လို့ တင်ပြခဲ့ကြတယ်။
ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူး။ ကျနော်တို့ရဲ့ တင်ပြချက်တိုင်းကို စစ်အုပ်စုက ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ခဲ့သလဲ။
အမျိုးသားတန်းတူရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်တွေအတွက် တောက်လျှောက် တင်ခဲ့ကြတယ်။
ဒါတွေဟာ ကျနော်တို့ တကယ်လက်တွေ့ကြုံခဲ့၊ တကယ်ဖြတ်ခဲ့ရတဲ့ တကယ့်ဖြစ်ရပ်တွေပါ။
ဒီလိုအနေအထားအောက်မှာ၊ ဒီလက်တွေ့တွေအောက်မှာ ကျနော်တို့ ဘာကိုစိတ်ကူးသွားယဉ်လို့ရမှာလဲ။
ဘာကို မျှော်လင့်ကြည့်လို့ ရမှာလဲ။
NLD က ပြောပြီးပြီ။
ခုမှ မဟုတ်ဘူး။ ၂၀၀၄ ခုနှစ် မေလ (၁၄) ရက်နေ့ကတည်းက ပြောပြီးပြီ။
၂၀၀၄ မေ (၁၇) ရက်မှာ ညီလာခံကို ပြန်စမယ်လုပ်တော့…
အဲဒီညီလာခံဆိုတာကလည်း ၂၀၀၃ သြဂုတ်လ (၃၀) မှာ သွားလေသူ ဗိုလ်ခင်ညွန့်ကိုယ်တိုင် စတင်ပြီး ဟန်နဲ့ပန်နဲ့ ကြေညာထားတဲ့ လမ်းပြမြေပုံ (၇) ချက်ရဲ့ နံပါတ်စဉ် (၁)၊
၁၉၉၅ နှစ်ကုန် ၁၉၉၆ နှစ်ဆန်းကတည်းက ဘယ်လိုမှ ပြန်စမရတော့လောက်အောင် အင်ဂျင်မရှိတော့တဲ့ ကားတစီး ထိုးရပ်သွားသလို ထိုးရပ်သွားတဲ့ ညီလာခံ။
အထူးသဖြင့် နိုင်ငံတကာမှာ အပြကောင်းအောင်။
စစ်အုပ်စုဟာ NLD ကိုလည်း ပြန်ပြီးတက်စေချင်တယ်။ SNLD ကိုလည်း ပြန်ပြီးတက်စေချင်တယ်။
တက်သာ တက်စေချင်တာ စစ်အာဏာရှင်စနစ် တည်မြဲရေးဆိုတဲ့ သူ့ရည်မှန်းချက်ကတော့ ငါးပြားတစေ့မှ အပွန်းမခံဘူး။
တချို့ မသိသား ဆိုးဝါးသူများကလည်း NLD က ခေါင်းမမာသင့်ပါဘူး။
တက်ကြည့်သင့်ပါတယ်။ အနိမ့်ဆုံးတက်တော့ တက်ကြည့်ပေါ့ ဆိုတာမျိုးတွေ။
ခလေးဆိုး ပူဆာသလို ပူဆာနေကြတဲ့အချိန် …
NLD ဘာလုပ်ခဲ့သလဲ …
မူပေါ်မှာအခိုင်အမာရပ်ပြီး အပျော့ပြောင်းဆုံးလုပ်ဟန်နှင့် တုံ့ပြန်ခဲ့တယ်။
“၂၀၀၄ ခုနှစ် မေလ (၁၄) ရက်နေ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ ကြေညာချက်” ဖြစ်ပါတယ်။
“အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်သည် ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်တည်ဆောက်
ရေးကို ရည်ရွယ်မျှော်မှန်းပြီး နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီက ကျင်းပသော အမျိုးသားညီလာခံနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ဆန္ဒရှိခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် အဖွဲ့ချုပ်အနေဖြင့် အမျိုးသားညီလာခံတွင် ပါဝင်ဆွေးနွေးလာနိုင်ရေးအတွက် အောက်ပါအနည်းဆုံးလိုအပ်ချက်
များကို အာဏာပိုင်တို့အား အသိပေးခဲ့သည်။ ၎င်းလိုအပ်ချက်များမှာ …
(၁) ညီလာခံဦးတည်ချက် (၆) ချက်သည် နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေ ရေးဆွဲခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စဉ်းစားရန်အချက်များသာ ဖြစ်ရမည်။
(၂) အခြေခံ (၁၀၄) ချက်သည်လည်း ဆွေးနွေးစဉ်းစားရန်သာဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ ဥပဒေကို ချည်နှောင်ထားသည့် အခြေခံမူများ မဖြစ်စေရပေ။
(၃) ယခင်ညီလာခံကျင်းပခဲ့စဉ်ကကဲ့သို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အပါအ၀င် နိုင်ငံရေးပါတီ များသည် ညီလာခံသို့ တက်ကြမည့် မိမိတို့၏ပါတီကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ရွေးချယ်ခံထားရသော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကို သက်ဆိုင်ရာပါတီများက လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့် ရှိရမည်။
(၄) ၂၀၀၃ ခုနှစ် မေလ (၃၀) နောက်ပိုင်းတွင် အာဏာပိုင်များက ချိတ်ပိတ်ထားခဲ့သော
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးများကို ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပြီး ဆိုင်းဘုတ်များဖြုတ်ချခြင်း
ခံခဲ့ရသည့် ရုံးများ၏ ဆိုင်းဘုတ်များပြန်လည်တင်ရန်။
(၅) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဦးနှင့် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့အား ထိန်းသိမ်းထားခြင်းမှ လွှတ်ပေးရန်၊” ဆိုပြီး အတိအလင်း တင်ပြတောင်းဆိုခဲ့တယ်။
နအဖသာ သဘောရိုးနဲ့ဆိုရင် လူထုအကျိုး၊ တိုင်းပြည်အကျိုးကိုသာ တည့်တည့်ကြည့်သူ ဖြစ်မယ်ဆိုရင် …
ဒီတင်ပြချက် (၅) ချက်ဟာ ဘာမှ ညှိလို့မရနိုင်စရာမရှိဘူး။ အကုန်ညှိလို့ရနိုင်တယ်။
ဒါပေမယ့် အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း စစ်အကျိုးစီးပွား ငါးပြားတစေ့အပွန်းမခံချင်တဲ့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများဟာ လက်ခံဖို့နေနေသာသာ လက်ပိုက်တောင်မဖြည်ခဲ့ပါဘူး။
ဒီအနေအထားအောက်မှာ။ ငါ့မြင်းငါစိုင်း ရိုင်းချင်တိုင်းရိုင်းနေတဲ့ နအဖရဲ့ ဒီမိုကရေစီကင်းမဲ့မှုတွေအောက်မှာ NLD ဟာ …
“အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်သည် ဤအခြေအနေအရ အမျိုးသားညီလာခံတွင် ပါဝင်ခြင်း
အားဖြင့် တိုင်းပြည်ကို အကျိုးပြုနိုင်မည်ဟု မယုံကြည်သောကြောင့် အမျိုးသားညီလာခံသို့ မတက်ရောက်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်သည်။” လို့ မိမိတို့ရဲ့ သဘောထားကို ပြတ်ပြတ်သားသား ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
ဒီ ပြတ်ပြတ်သားသား ဆုံးဖြတ်လိုက်နိုင်မှုကပဲ NLD ကို NLD အဖြစ် ယနေ့အထိ ဂုဏ်ရောင်
ပြောင်စွာ ရပ်တည်နိုင်စေခဲ့တယ်လို့ ကျနော် သဘောရတယ်။
ဘယ်အရာဟာ ယုံကြည်အပ်တဲ့စကား။ ဘယ်အရာဟာ မယုံကြည်အပ်တဲ့စကား။
ဘယ်အရာဟာ လုပ်အပ်တဲ့အလုပ်။ ဘယ်အရာဟာ မလုပ်အပ်တဲ့အလုပ် ဆိုတာကိုတော့ ရွေးချယ်တတ်ကြရပါလိမ့်မယ်။
အနှစ် (၄၀ - ၅၀) ကျောကော့အောင် ခံလာပြီးကာမှတော့ …
ကရေကရာနဲ့ ဘာညာကို သဲကွဲဖို့ သင့်ပါတယ်။
မမျှော်လင့်ကောင်းတာကို မမျှော်လင့်ကြတာ ကောင်းလိမ့်မယ်။
စိတ်ကူးမယဉ်သင့်တာကို စိတ်ကူးမယဉ်ကြတာ ကောင်းလိမ့်မယ်။
စမ်းကြည့်ကြည့်လိုက်ပါလား သိရတာပေါ့ ဆိုတာမျိုးဟာ အရာကိစ္စတိုင်းအတွက်တော့ မတိုက်တွန်းကောင်းဘူးလို့ အောင့်မေ့ပါတယ်။
ငရဲတွင်းကိုဆင်းကြည့်ပါ ယပ်တောင်တချောင်းပေးလိုက်မယ် ဆိုတဲ့စေတနာမျိုးကလည်း မဖြစ်သင့်ပေဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။
မတိုက်တွန်းကောင်း မတိုက်တွန်းအပ်တဲ့ ကိစ္စတွေကို မတိုက်တွန်းခြင်းဖြင့် မိတ်ကောင်း
ဆွေကောင်း ပီသကြောင်းကို ပြသသင့်ပါတယ်။
စစ်အုပ်စုရဲ့ မာယာတောကို ဖြတ်ဖို့ဆိုရင် NLD မှာ သို့မဟုတ် လူထုမှာ မှန်ကန်တိကျတဲ့ အဆုံး အဖြတ်နှင့် ရဲရင့်တည်ကြည်တဲ့ ပိုင်းဖြတ်မှုတွေ အမှန် ပိုင်ဆိုင်ကြရပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တော့ အဲဒီလိုပဲ သဘောရတယ်။
မြွေမှန်သူတိုင်း တွင်းဝင်ဖြောင့်နိုင်ကြပါစေ။ ။